Dhuguma TPLF ADWUI keessaa bahuuf murteesseeraa? - BBC News Afaan Oromoo
Walgahii Mana maree Adda Dimokiraatawa Warraaqsa Ummattoota Itoophiyaa (ADWUI) Kamisa darbee gaggeeffachuun, yaada walitti makamuu sagalee guutuun yeroo mirkanneesseetti, walgahicharratti akka hin argamne dursee akkuma beeksiise TPLF osoo hin hirmaatiin hafeera.
TPLF kanaan duras murtewwaan ADWUIn dabarsu sababiiwwan adda adaatiif akka hin fudhannee himaa tureef walgahii mana maree ADWUIn waamee irratti hirmaachuu dhiisuun ejjannoo mormii taasisaa tureef tarkaanfii biraa akka ta'e amanama.
Dhuguma TPLF ejjannoosaa kanaan itti fufee ADWUI irraa adda baha? Yoo akkas ta'e ammoo hiikkaan inni siyaasaa biyyattii irratti qabaatu maal? kanneen jedhan gaaffiilee hedduun kaasaniidha.
Miseensoonni Addiichaafi paartileen deegartootaa walitti makamuun deegaranis ta'e TPLF mataansaa ADWUI daandii amma har'aatti dhuufeen itti fufuu akka hin dandeenyee amananilleen, kanaan booda ammoo dhaabichii attamiin adeema isa jedhurratti waliigalu hin dandeenye.
Walgahii koree hojii raawwachiiftuu ADWUI Sambata darbe gaggeefameen tureetti aansuunis, mariin MM Abiy Ahimad Dilbata miseensoota hojii raawwachiftuu TPLF waliin taasisanii turan bu'aa qabatamaa malee hafeera.
Guyyoota itti aanaan keessattis waldiddaan qaamoolee lamaanuu cimee kan itti fufe fakkaata.
ADWUI fi TPLF 'waliin taanulleen adda baaneerra'
Garee siyaasa mormituu keessa kan turan Obbo Mushee Sammuu: "Siyaasni akka heerregaa kun yoo ta'e kanatu ta'e kan jedhu waan hin qabaanneef, taatee kana keessaaa carraan itti fayyadaman akka jiru yoo amanan qaamooleen lamaanuu mariidhaaf boodatti deebii'uu ni danda'u," jedhanii amanu.
Kun hafee, miira diinummaatiin wal himannaan kan itti fufan yoo ta'e, carraa waliin mari'achu ni balleessa jedhu.
''Qaamoolee lamaan irraayyu kan eegamu maqaa walii dhahuu, wal balaalleefachuufi ibsawwan hintaanee baasuu irraa of qusachuun tasgabbiin haala xinxaluu barbaachisa. Kana raawwannaan yeroo hundaa carraan jira.
Carraa kana kan murteessu keessattuu piropogaandaa dhaabbilee miseesnsa ADWUI kana booda gaggeessaniiru,'' jedha Obbo Musheen.
Garaa garummaafi waldiddaan uumammee jechuun hunduu dhumate, walitti dubbatamu hin danda'amu jechuu miti. Garaa garummaan kunis kan adeemasaafi adiyooloojiiti.
Kanaafuu haala tasgabbaa'een dhiimmoota daandii qabsiisuu dhiisuun badiinsa paartiilee addichaas ta'u danda'a yaaddoo jedhu akka qaban himu Obbo Musheen. Kun ammoo uumtaafis ta'ee biyyaaf cimaadha jedhu.
''TPLF keessa taa'ee malee bahuun qabsaa'u hinqabaatu,'' amantaa jedhu qabu Obbo Musheen.
Gaaffii TPLF kutatee ADWUI adda waan bahu sitti fakkaataa? jedhuufis deebii yoo kennan, ''TPLF kana duraa qofaasaa jiraateera. Sochii Dimokiraatawa biyyaaleessa Amaaraa, OPDO fi Sochii Dimikraatawa Ummattoota Kibbaa waliinis hojjateera.''
''Bakka kaan hin turreettis paartileen kunneen siyaasa biyyattii sochoosaa turaniiru. Dhimmi guddaan ofi haala qabatamaa waliin wal simsiisuudha.
Gama biraatiin ammoo ADWUI tiin ala dhimmoonn ni raawwatu? jechuun gaafachuunis ni barbaachisa'' jedhu.
Obbo Musheen akka jedhaniitti dhuguma akkuma TPLF jedhuutti ummanni Tigraayi gutummaatti TPLF faana kan jiruu yoo ta'e, ADWUItiif qor-qalbii ummata Tigraay argachuun salphaa hin ta'uuf.
Ummaticha waliin mari'achuun carraa eegeeree biyyattii irratti waliin murteessuu xiqqaadha. Lakkoofsi ummatichaa hangam ta'ulleen waliin qalbii guutuun kan hin hojjannee yoo ta'ee dhiibbaansaa baayyee ta'u mala.
''Kan walii hingallee paarilee waan ta'aniif qalbiin ummatichaa hawwatamu hinqbaatu. Ummata Tigraayi dhabuunis waan salphaa ta'e jedhee hinyaadu,'' jedha Obbo Musheen.
Obbo Musheetiif garaa garummaan kun kan itti fufuufi kan keessaa burqe miti. Walitti dhufeenyi TPLF fi ADWUI adda citee hafe amantaa jedhuus hin qaban.
Aanga'oonni paartiilee kanneen imala qabsoo dheeraa waan dabarsaniif sababiidhaaf eddoo ni kennu jedhee yaadu.
TPLF akka paartii mormituutti?
TPLF yoo ADWUI addaa bahee tarkaanffiin ittaanu maal ta'a gaafii jedhuuf, yaadi garaa garaa dhiyaataa jira. Isaan keessaa tokko mormitu ta'uun itti fufa kan jedhuudha.
Obbo Musheen ammoo, ''Addicha keessaa bahuu mormiituu ta'uudhaa?'' jechuun gaafatu.
''Qaamni kaanis mormaa ta'u danda'a. TPLF warra kaan walitti qabuun carraan motummaa ta'usaa dhumeefiira jechu miti'' jechuun dubbii gara biraatin deemuuf carraan jiraachu himu.
Miseensi hojii raawwachiftuu TPLF fi Itti-gaafatamaa Ittaanaan waajira ADWUI Obbo Getaachoo Raddaa gaaffiifi deebii VOA waliin taasisaniin, carraan paartichaa kan murtaa'u MM ykn ADWUI tiin osoo hin taane, deeggartootaafi ummata Tigraayiin jechuunsaanii ni yaadatama.
Tigraayi akka 'fakkeenya biyyaa' taasisuu
Torban darbee keessaa Tigraayiin akka fakkeenya biyyaa (Defacto State) taasisuu ilaalchisee barruun sagalee TPLF 'Wayin' hangam waldhabdeen ADWUI fi paarticha jiduu jiru akka cime kan agarsiise ture.
Kunis yaada 'Tigray foxoquuf' jedhuu agandaa haasaa taasiseera.
Dr. Abiyyii fi Obbo Dammaqaan morkattoota cimoodha jedhame
Yunivarsitii Maqaleetti barseesaa Seeraa kan ta'an Obbo Makoonniin Fisahaa barreeffama barruu Wayyin irratti bahee ''gutummaa gutuutti ejjannoo TPLF dha ykn miti jedhame murteessuun ni rakkisa. Haata'u malee wanta akkeeku tokko qaba,'' jedhu.
Yaadni kunis osoo haala barreeffamaatiin hinbahiin duras namoota midiyaa hawaasaarratti barreessan fi warreen barataniiru jedhamanii osoo hinhanfe callaqisiifamaa turera.
Obbo Makoonnin akka jedhaniitti, TPLF Tigraay foxoqsuun gonkumaa yaada hinqabu jechuun yaaduu hindanda'amu. Isaaf siriiyyuu 'diriqisiifameen fuula kiyya gara kanatti naanneeffachuun danda'a' kan jedhuuttu itti mullata. Kanas yoo ta'e ammoo TPLF qofaasaa kan murteessu hinta'u.
Akka Tigree tokkootti ejjannoon dhimma kanarratti qaban, ''Tigiraayi olaantu Itoophiyaa olaantuunana fakkeessa. Olaanaa yoo jedhamu uummata jechuu waan ta'eef,'' jechuun deebii kenanna Obbo Makonniin.
Haa ta'u malees, 'qabsoon keenya duubatte deebiifameera, dhiibamneera' miirri jedhuu ummata Tigraayi keessatti ballinnaan kan calaqisu ta'u himu Obbo Makoonniin.
Dhugaatti ummanni Tigraayii hangam foxooquu barbaada kan jedhu baruuf qorannoo gadi fagoo barbaachisa.
ADWUI waliigalu yoo dadhabe ni diigama, diigamuus qabaata. Haa ta'u malee kun carraa Itoophiyaa murteessuu hinqabaatu ejjannoo jedhu kan qaban Obbo Makoonnin, ''Du'aatiinsaa hinlabsamne malee, ADWUI erga du'ee tureera'' jedhu.
Dhaabbileen miseensaas ta'ee deegartootaa Walitti baqiinsaan walqixa murteessu
Waajjira ADWUI tti ogganaan garee walitti baqiinsa addichaa qoratee kan ta'an Dr Tamasgan Burqaa akka jedhaniitti, kana duras taanaan gaggeessaa kan turan Imaammataafi tarsiimoodhuma ADWUI waan tureef dhaabbilee miseensaa qofaa osoo hintaanee dhaabbileen deegartootaas ofiisaanii diiguun sadarkaa wal qixxeen dhufanii paartii Badhaadhummaa hundeessuu akka qabaatan BBC'tti himaniiru.
''ADWUI paarticha hundeessuun kan isaan fidu osoo hintaane, haala walqixa ta'een ijaaramuun kan hundeessaniidha. Qorannoon keenya kan agarsiisuu kanadha. Isaan kan kan murteessan ni ilaala,'' jedhu Dr Tamasgan.
Gama yeroo walitti baquu ilaaluun, ''rakkoolee jiran hiikuuf ammuma waliitti baqaa jenneenii turre. garuu murteen kan siyaasaati,'' jedhaniiru.
Carraa eegeeree walitti baqiinsaa fi ADWUI
Addi biyyattii waggoota 30n darbaniif biyyatti bulchaa ture hundeessuu keessatti gahee olaanaa kan xabate TPLF, adeemsa hundeeessuu dhaabbata itti aanuu keessatti akka hinhirmaannee beeksiseera.
Haa ta'u malee miseensoonni addichaa hafaniifi dhaabbileen deegartootaa walitti baqiinsa dhuugomsuuf adeemsa saffisaa raawwataa jiru. Adeemsi murtee hojji raawwachiftuu addichaatiin eegalees, turtii toraan hingunnee keessatti murtee mana marichaatiin gara sadarkaa ittaanuutti darbeera.
Isaan boodas dhaabbilee kunneen miseensoota isaanii waliin murteessuun, gaaffii walitti baquu gara yaa'ii waliigalaatti geessuun murtee dhumaa itti kennu. Kunis adeemsa hanga ammaatti jiruun badaa guufuu kan uummatu hinfakkaatu.
TPLF ejjannoo hanga ammaatti qabuun yoo itti fufee, gaaffilee seeraa walitti baqiinsa irrati qabu kaasuun mormuu ni danda'a. Kanaan alattis kana dura miseensoonni isaa tokko tkoo akka caqassniitti, gareewwan siyaasaa gara biraa waliin qindaa'uun adda biyyaaleessaa paartii Badhaadhummaa mormu hundeessuuf ykn qindoomina uumuun filannoo ittaanu irratti akka hirmaatu eegama.
Ejjannoo hanga ammaatti fudhateenis, TPLF of baqsuun deegartoota loltummaafi qabsoo siyaasaa duraanii isaa waliin miseensa Paartii Badhaadhuummaa ta'uuf carraansaa xiqqaadha.
Siriiyyuu kana mormuun bakka bu'uura deeggarsa isaa ta'e naannoo Tigraayiitti hiriira mormii walitti baquu mormu akka gaggeefamu taasisuuf sochii taasisaa jiraachutu himama. Kunis TPLF garamiitti adeemaa akka jiru kan kan hakeekuudha.
Haala kanaan, ADWUI tarkaanfii walitti baquutiin kan itti fufuu yoo ta'e, TPLF paartii haaraa keessa jiraachunsaa kan yaadamu hinta'u.
Hundumaafuu guyyoota itti aanan keessatti gareewwan siyaasaa kunneen murteeen irra gahanis, kan siyaasa Itoophiyaa keessatti sarara murteessaa kan kaa'u ta'a.
'Barattoota ugguraman jedhamu 17 keessaa barattoota ta'uun kan mirkanaa'e 14'